Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Waxaan Rabaa Ilmo: Ulajeeddo!
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Haddii galka qorshaha safarka lagu calaamadeeyay Dalxiisnimada Taranka, Socdaalka Taranka, ama Daryeelka Taranka ee Xudduudaha, haweenka iyo lamaanayaasha waxay ka tagayaan nambarka sirta gurigooda iyaga oo "ubad ka dhigaya" meesha ugu sareysa liistadooda.
Rabitaanka cunug kuma koobna dakhliga, da'da, nooca galmada, ama juqraafiga.
Cilmi baaris ayaa cadeyneysa xaqiiqda ah in dumarka ka socda wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe (LMICs) iyo sidoo kale kuwa ka imanaya magaalooyinka waaweyn ee Yurub iyo Ameerika ay u safri doonaan si ay ubad dhalaan.
Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ku qiyaasayaa in afartii lamaane midkood ee ku jira LMICs uu leeyahay dhibaatooyin taranka.
Waxaa lagu qiyaasaa in 186 milyan oo lamaane ah oo dalalkan ku nool (marka laga reebo Shiinaha) ay ugu yaraan 5 sano isku dayeen inay uur qaadaan guul la'aan. In kasta oo xaaladaha caafimaad ay caan ku yihiin dhibaatooyinka bacriminta ee waddammada ku wada nool maalka, haddana dhaqamada qaarkood, haweenka madhalays ah ayaa inta badan qoysaskoodu iska fogeeyaan lagana reebaa howlaha bulshada iyo dhaqamada dhaqanka. Waxay u badan tahay inay yihiin dhibanayaal rabshada guriga ama ay fureen ninkooda. In kasta oo dhalmo la'aantu ay la mid tahay dhibaatooyinka ka dhasha nidaamka taranka ragga sida dumarka oo kale, haddana dumarka badanaa waxaa lagu eedeeyaa ku guuldareysiga soo saarista ilmo.
Madhalaysnimo ayaa loo tixgeliyaa inay tahay arrin caafimaad oo daran waxayna saameyn ku yeelaneysaa boqolkiiba 8-10 boqolkiiba lamaanayaasha adduunka. Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC - 2013) iyo Xafiiska Caafimaadka Haweenka (2019) waxay ogaadeen in boqolkiiba 9 ragga iyo 10 boqolkiiba haweenka da'doodu u dhaxayso 15 - 44 ay la tacaalayaan caqabadaha madhalaysnimada ee Maraykanka iyo Warbixinta Taranka Biyoolaji Endocrinology (2015) go'aansaday in ku dhowaad 48.5 milyan oo lamaane ah ay la kulmaan madhalaysnimo adduunka oo dhan.
The Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay qiyaaseysaa in 750,000 oo degane Mareykan ah ay daryeel caafimaad dibada ugu safraan sanad walba. Dalxiiska bacriminta hadda waxay maamushaa in ka yar 5 boqolkiiba ku dhowaad $ 55 bilyan (2014) suuqa dalxiiska caafimaadka; si kastaba ha noqotee, waxaa la filayaa inay kudhowaad afar laab ka weynaato cabirka sanadaha soo socda. Waxaa lagu qiyaasay in suuqa caalamiga ah ee taranka tikniyoolajiyadda ay soo saartay dakhli dhan $ 22.3 bilyan (2015) iyadoo daawooyinka bacrimintu ay yihiin dhakhtar si dhakhso leh u fidaya.
Dadku waxay qirayaan inay wajahayaan “arrimaha bacriminta,” markay awoodi kari waayaan inay yeeshaan uur caafimaad kadib 12-bilood oo isku day galmo ah. Madhalaysnimo, ama awood la'aanta uur qaadista, waxay ku dhacdaa qiyaastii 8-12 boqolkiiba lamaanayaasha doonaya inay uur qaadaan ama 186 milyan oo qof oo adduunka ah. Meelaha qaarkood, heerarka dhalmo la'aanta ayaa ka sarreysa celceliska adduunka waxayna tagi karaan illaa 30 boqolkiiba iyadoo ku xiran waddanka.
Nidaamyada ugu muhiimsan waa bacriminta loo yaqaan 'invitro fertilisation (IVF), bacriminta macmalka ah ee deeq bixiye iyo sidoo kale ku-beddelid iyo la xiriirta Teknolojiyadda Taranka ee Caawinta (ARTs).
Ujeeddooyinka safarka ee daryeelka caafimaad waxaa keenay caymiska daryeelka caafimaadka oo aan ku filnayn ama aan lahayn guriga iyo kordhinta dalabaadka habraacyada ee aan daboolin qorshooyinka caymiska ee jira sida daaweynta bacriminta, dib u beddelka jinsiga, dib u dhiska ilkaha iyo qalliinka qurxinta.
Rakaabka qaar waxay ku mashquulsan yihiin dalxiiska bacriminta markay gartaan in dhakhaatiirta bacriminta ee ka wanaagsan (ama hagaagsan) laga heli karo meel ka baxsan beeshooda halka kuwa kale ay raadiyaan daaweynta taranka ee ka baxsan aaggooda si ay uga gudbaan sharciyada, sharci ahaan / anshax ahaan / diin ahaan ama xanibaado kale iyo / ama iska ilaali liisaska sugitaanka dheer. Umado badan ma ogola daaweynta taranka ee lamaanaha isku jinsiga ah ama dumarka keligood ah. Sida laga soo xigtay maamulayaasha machadka hormarinta iyo isdhaxgalka daryeelka caafimaadka (IDIS Foundation), “sababaha ay dadka ugu safraan dibada si ay u raadsadaan daaweynta bacriminta waxaa loo kala saari karaa qeybaha: qiimaha, tayada, iyo helitaanka daaweynta…”
Si kastaba ha noqotee, xitaa iyada oo dhakhaatiirta ugu fiican iyo rugaha caafimaad ee ugu horumarsan fursadaha ubad la helo iyadoo la kaashanayo sayniska caafimaadka ma fiicna. Haweenka ka yar 35 sano, kaliya 36 boqolkiiba ayaa uur qaadi doona wareega IVF iyaga oo isticmaalaya ukumo u gaar ah oo aan qaboojin (CDC). Markay gaadho 41, waxay ka yar tahay saddex-meelood laba taas; ka dib 42, tirooyinku waxay u dhacaan nus kale ilaa 6 boqolkiiba. Heerarka IVF ee loo adeegsado beedka deeq bixiyeyaasha ayaa ka sarreeya laakiin weli waxay ka hooseeyaan boqolkiiba 50. Inkasta oo heerarka guusha ay u muuqdaan kuwo rogaya bogagga shabakadaha, Carolin Schurr, oo ah joqoraafiiste ka tirsan Jaamacadda Bern oo daraasad ku sameeya warshadaha bacriminta ee waddamada kala duwan ayaa ka hadlaya heerarka guusha ee la xayeysiiyay sababtoo ah "runtiina waxay kuxirantahay sida aad u xisaabiso, waxaana jira qol badan si wax looga qabto. ”
Iyadoo aan loo eegin xogta, dalxiiska bacriminta ayaa sii fideysa maadaama daryeel caafimaad oo wanaagsan laga heli karo meelaha u baahan safarka iyo xarumaha caafimaad ee tagaya waxay bukaanka u fidiyaan tikniyoolajiyad casri ah, daawooyin casri ah, aalado casri ah, soo dhaweyn heer sare ah, iyo daryeel shaqsiyeed oo ku jira “qiime” qiimaha.